Ukuphupha ngokuthinjwa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Igama elithi "ekuthinjweni" inokufumaneka kwiimeko ezahlukeneyo kakhulu. Ungabanjwa okanye uboshwe izandla okanye ubone omnye umntu, mhlawumbi umntu osondele kakhulu kuwe. Izilwanyana ezithinjiweyo zinokuvela nakwiphupha.
Ukutolikwa kwephupha elinjalo, nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela intolongo ngokwayo enokubaluleka. Izizathu okanye abantu abakhokelele ekuvalelweni kufuneka nabo bathathelwe ingqalelo.
Ezinye iisimboli zamaphupha anomdla kule meko inokuba "ngamapolisa," "amapolisa," "ukubamba," "ukubamba," okanye "ukuba", okanye "ubusela." Sebenzisa nje umsebenzi wokukhangela ukufumana uphawu olufana nawe.
1 Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha kutolika isimboli yamaphupha "ekuthinjweni" ikakhulu njengomboniso wemvakalelo ye Umda ebomini bokuvuka. Mhlawumbi iphupha liziva ngathi lingene ngaphakathi el mundo ngokwenene.
Iphupha elo kufuneka lenze umntu ochaphazelekayo ukuba azi ukuba linoxanduva lokuziva. Kuba uloyiko okanye ukungazi kwakhe kwamkhokelela kule meko.
Nabani na ozivalele ebuthongweni bakhe ngenxa yesigwebo sasejele ufuna ukuvuka. inkululeko yomntuukuze uphumeze iminqweno yakho. Ukuba ubona abanye abantu ekuthinjweni ephupheni, mhlawumbi entolongweni okanye ejele, kuya kufuneka ulumke kwihlabathi loonogada kwaye ungazibandakanyi neshishini eliyingozi. Kuba ezi zinokuba yingozi enkulu. Ukuba uva ukuncwina kwala mabanjwa xa uleleyo, kuya kufuneka ucinge ngononophelo malunga nezicwangciso zakho kwilizwe lokuvuka.
Ukuba umphuphi ungena elugcinweni njengejoni emva kwemfazwe ephupheni lakhe, kuya kufuneka athathwe ngokubanzi amaxesha amabi ngokudibeneyo, enokuthi nayo izise iintlungu kunye noxinzelelo. Ukuba uzama ukubaleka kwaye ubaleke inkampu yentolongo xa usenza amaphupha, ungathanda ukubaleka kwiingxaki zakho kwilizwe lokugada.
Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwimbono yengqondo, iinkolelo okanye iinkolelo ezingasasebenziyo ziyavela kumfanekiso wephupha "lokuthinjwa" umkhetheekufuneka umntu oleleyo ngoku ayiqonde. Kungenxa yokuba kufuneka ujongane nezi njengoko zikuthintela ngendlela ethile. Mhlawumbi lifikile ixesha lokuba uzisuse.
Ukuba iphupha lifumana ukuvalelwa okanye ukuvalelwa entolongweni kunye nokuhlushwa ngelixa ulele, kufuneka lizame ukumanyana kwinqanaba lokuqonda. iintlungu zengqondo inkqubo. Ukuba kukho ukuphulukana nenkululeko ephupheni kuba omnye ubanjiswe ngomnye, enyanisweni ukuphulukana nenkululeko kuyesatshwa kwinqanaba lokomoya. Umntu oleleyo woyika ukuphenjelelwa kakhulu ngabantu abamngqongileyo.
Ukuba ukhululwe ekuthinjweni ephupheni lakho sisihlwele esiza kubethwa, kuya kufuneka ulumkele ukujongana nokunyamezeleka kwihlabathi elivukayo.
Ukubona kwezilwanyana ekuthinjweni, mhlawumbi nakwikheyiji, enjenge-mink, ephupheni kunokuba njalo ukululeka ukusuka ezingqondweni ukulawula ngcono indlela oziphethe ngayo. Kuba ukuba lo mntu kuthethwa ngaye akenzi le nto, baya kuzenzakalisa ekuhambeni kwexesha.
Uphawu lwephupha «ekuthinjweni» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba eligqithisileyo lohlalutyo lwamaphupha, ukuvalelwa ephupheni kunokuqondwa njengophawu kulowo uphuphayo ukuba mkhulu kakhulu ebomini bokuvuka. wajika wangena ngaphakathi ibonisa okanye uxakeke kakhulu kuye.
Kuya kucetyiswa ukuba uvule izinto ezintsha kwaye ube nengqondo evulekileyo. Uncedo lobungcali lunokufuneka koku.